Baarlamaanka oo cod kalsooni leh ku ansixiyey R/wasaare Cabdi Faarax Shirdoon
Updated About:216 days ago 0
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdiso ayaa si buuxda codka kalsoonida u siiyey R/wasaaraha cusub Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
Kulanka Baarlamaanka oo ay ka soo xaadireen 215 xildhibaan ayaa waxaa hadal ka jeediyay R/wasaaraha Soomaaliya Shirdoon Saacid, isagoo si gaar ah uga hadlay qorsho howleedkiisa iyo Xukuumada uu soo dhisayo.
Baarlamaanka ayaa cod gacan-taag ah u qaaday R/wasaaraha cusub, waxeyna isku raaceen in R/wasaare Saacid uu shaqadiisa wato.
Gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Soomaaliya Max’ed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa ku dhawaaqay natiijada codka loo qaaday kalsooni siinta R/wasaare Saacid.
Prof. Jawaari ayaa sheegay in 215 xildhibaan ee kualnka soo xaadriay ay dhamaantood u codeeyeen kalsooni siinta R/wasaare Saacid.
R/wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inuu xooga saarayo arrimaha gudaha, xiriirka arrimaha dibada, ammaanka iyo siyaasada, la dagaalanka musuq maasuqa, isagoo balan qaaday inuu soo dhisayo xukuumad tayo leh.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Max’ud oo hadal ka jeediyay kulanka baarlamaanka ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha uu ku soo magacaabay uu ku guda jiro wada tashi, isla markaana uu rajeynayo in xukuumada la soo dhisi doono ay noqoto mid wax ka qabata arrimaha dalka Soomaaliya.